निधार फेरि पनि खाली नै भो, तपाइहरूको न्यानो माया अनुभूत गरिरहेको छु यति बेला दिदीहरु - Ujyaalo Nepal
निधार फेरि पनि खाली नै भो, तपाइहरूको न्यानो माया अनुभूत गरिरहेको छु यति बेला दिदीहरु
By ujyaalo	 Last updated Oct 30, 2019 105
मुक्ती गौतम, क्यानडाबाट ।
स्मृतिमा तिहार !
बिहानै काग आएर बस्यो, घर पछाडि सल्लाको रुखमा । तिहारको याद लिएर आयो । अरू बेला पनि काग देख्दा दुइटा कुरा दिमागमा आईहाल्छन्, एउटा पाहुना आउने कुरा र अर्को तिहार । जाडोमा चरा देखिँदैनन् यतातिर, अरुबेला देखिदा बाल्यकालका अनगिन्ती सम्झनाहरू बोकेर आउँछन् । कहिले यता र कहिले उता गर्दै हिँड्ने यी चराहरु देख्दा आफ्नै नियति सम्झिईन्छ घरी घरी । लामा र छोटा अनगिन्ती उडानहरू भर्दै ठाउँ बदली रहने चराहरु र विदेशियर आफ्नो गाउँ बिर्सन नसक्ने म जस्ता प्रवासीहरूका कथाहरू उस्तै उस्तै त होलान् !
काग कराउँदा, आगो फरफराउँदा कसैको पर्खाई हुन्थ्यो घरमा । म आफू सानो छँदा बाहिर पढ्न गएका दाइ आउने व्यग्र प्रतिक्षा रहन्थ्यो यती बेला । आमा बाहिर हेरि रहनुहुन्थ्यो, आँखै आँगनसँग जोडिएको दुई पर्खाल बीचको भित्र छिर्ने साँघुरो बाटोमा टाँसिएका हुन्थे आमाका । भित्र गढेका आमाका आँखाहरूमा त्यो साँगुरो बाटो प्रष्ट देखिन्थ्यो दशै तिहार भरि । दाइ नआएको वर्ष त पछि पछिसम्म पनि त्यतै हुन्थ्यो त्यो बाटो मधुरा आँखाहरूमा ।
सानी दिदीको विवाह भयो, दिदी थपिनु भयो आमाको त्यो पर्खाइमा । पछि म पनि थपिएँ कलेज पढ्न थालेदेखि । मेरो जागिर सुरु भएपछि आमा आफै त्यो गाउँ छोडेर कहिले काठमाण्डौ मसँगै भौँतारिनु हुन्थ्यो दशै तिहारमा, कहिले गाउँमा पुग्नुहुन्थ्यो । जीवनको अन्तिम दशै तिहार त यतै क्यानडामा मनायौं । आमा जता भएपनि त्यो घर नै हुने रहेछ । गत साल १७,१८ वर्ष पछि घर जाँदा, आमा नभएको त्यो घरमा पुग्दा अरूकै घर पुगे झैँ भयो ।
हामी जम्मा १० जना जन्मिएका रे, अहिले तीनजना बाँकी छौं, र त्यो पनि तीनतिर । छ जना त सानोमै मरेका तर एकजना मेरो दाजु भने मारिएका तत्कालीन विद्रोही माओबादीबाट । ठूली दिदी जन्मिए पछि अरू केही दिदीहरू र सायद एकजना दाइ पनि जन्मिएर अकालमै मर्नुभयो रे । बा बिरक्तिएर घर छोडेर हिँड्नु भएछ त्यसपछि । स्वर्गद्वारी पुगेर प्रभुको दर्शन पछि दुइटा छोराको बर लिएर घर फर्किनु भएको रे बा । माओबादीबाट मारिएका मेरा दाइ यदु गौतमको जन्म चमत्कार नै भयो मेरा बा आमाका लागि । दाइले पुरै खुसी लिएर आउनु भएछ घरका लागि र आमाका लागि त पुरै संसार लिएर ।
दाइको महत्व हामी सबैको अघि खास थियो त्यसैले पनि । पछि दाइ घरमा आउँदा कहिले कहि त म आफू त्यहाँ भएको पनि महसुस हुँदैनथ्यो, तर आफै नभएको त्यो अनुभूति पनि कम्ती मजाको थिएन ! दाइ देख्दा सबै भुल्थें म ।
दाइ कम्युनिस्ट हुनुभयो । कहिले भूमिगत र कहिले जेल । दशै तिहारमा मौकाले घर आउँदा टीका वर्जित हुन्थ्यो हाम्रा लागि । अरूका निधार हेरेर कल्पिन्थ्यौं हामी । मेरो सानो दिमागमा टीका लाउन नपाउनुको अर्थ त घुस्दैनथ्यो तर दाइले गरेकोले ठीकै होला भन्ने लाग्थ्यो त्यो बेला । बिचरा दिदीहरू भने नमीठो मुख लाएर बसि रहनुहुन्थ्यो । म दाइको पछि लाग्दै, उहाँका कुरा सुन्दै टीका बिर्सन्थें । दाइ आएपछि घरको रमझम नै अर्कै !
बहुदल आएपछि दाइ रुकुम नै फर्किनु भयो र अलि फेरिनु पनि भो । खसी काट्न थालियो, जमरा राख्न थालियो घरमा, रोटी पाक्थे । पछि पछिसम्म खाना पाईने ती रोटीहरू अझै सम्झनामा आउँछन् आमासँगै । त्यसपछि दिदीहरू पनि तिहारमा खुसीले मच्चिदैं आउन थाल्नु भो । हाम्रो घरमा दसै तिहार बल्ल रमाइलो हुन थाल्यो ।
तर लामो समय टिकेन यो खुसी । ०५५ सालमा दाइ निर्ममतापूर्वक मारिनु भो । पर्खाई नै पर्खाई भो सधैँ भरि । अहिले आमा पनि हुनुहुन्न र दाइ पनि – तिहार आएको त थाहा हुन्छ गएको कहिल्यै थाहा भएन त्यसपछि । बारीमा फूलेका हजारी किन फुल्छन् होला जस्तो लाग्छ, मखमली किन त्यति गाढा देखिएर हामीलाई जिस्क्याउँछन् जस्तो लाग्छ । आफू विदेशियपछि त दशै तिहार सधैँ बिथोल्न आउँछ यो मन । पुराना स्मृतिहरू बोकेर आँखाभरि ती दिनहरू सम्झनु बाहेक अब केही बाँकी रहेन झैँ हुन्छ यो बेला विदेशमा ।
यो याम गर्मी सकिएर हिउँद लाग्न थाल्छ यता । जंगलभरि रुखहरू फुल्छन् मनै लोभ्याउने गरि । जाडोमा नाङ्गिनु अघि उखरमाउलो भएर राता, पहेँला, बैजनी र के के भएर जङ्गल पुरै ढाक्छन् । झर्नु अघि यसरी नफूले पनि त हुने ! तर फुल्छन् आँखाले हेर्दा नभ्याउने गरि पर पर सम्म, जाऊँ जाऊँ भैरहन्छ घरी घरी त्यतै मन लोभिएर । घाम लाग्दा अझ यो जाडो सुरु हुन लागेको याम प्यारो लाग्छ, घामका वाक्ला किरणहरू रुखमा पर्दाको कुरा त अझ अर्कै – मन प्रफुल्ल भएर माथि माथि पुग्छ, दशैँ तिहार सम्झिन्छ अझ जोडले ।
चाडबाडमा धेरै आफन्त सम्झिन्छ । चाडबाडसँग धेरै बाल्य कालका स्मृतिहरू जोडिएका हुन्छन् । यति बेलै दुखद घट्नाहरु श्रृङ्खलाबद्ध भएर आई रहन्छन् दिमागमा, छोडेर गएकाहरुको याद ताजा भएर आउँछ । समयले टाढा बनाउँदो रहेछ भएकै परिवारका सदस्यहरूलाई पनि ।
यति बेला उही गाउँ, उही टौवा, उही मेला, उही मेलामा हात समातेर हिँड्ने साथीका हातहरू याद आइरहेका छन् । लट्ठी बोकेर भैली खेल्दै हिँडेका दौँतरीहरू, भैलीको आम्दानी पछिको भैले टाकुरामा खाएको अली अलि काँचो भातको भोज, भोज पछिको झगडा ताजा भएर आइरहेका छन् । तिहारे लुगा, नयाँ नोट, फुरुङ्ग भएको मन – अहिले आफैसँग छ ।
स्मृति अचम्मको नमेटिने पाटो रहेछ जीवनको । यो नभैदिएको भए जीवन कति खल्लो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ । जीवन कहाँ हुन्छ र भनेजस्तो, जीवन कहाँ हुन्छ र खोजे जस्तो ! अप्ठ्यारा दिनहरूमा पनि मीठा स्मृतिहरू भरेर रमाउनुको मजा नै बेग्लै !
यस पटक यो तिहार यिनै स्मृतिहरूसँग बिताउने निधो भयो । मेरा दिदीहरूलाई यतै बाट शुभकामना तिहारको । निधार फेरि पनि खाली नै भो, तर स्मृति त ताजै छन् नि ! तपाइहरूको न्यानो माया अनुभूत गरिरहेको छु यति बेला दिदीहरु ।
तिहारको शुभकामना सबैमा !